फ्रिज नभएकोले मासु कसरी लामो समय सम्म स्टोर गर्ने ? हेर्नुस ४ विधिहरु | Press Pati
फ्रिज नभएकोले मासु कसरी लामो समय सम्म स्टोर गर्ने ? हेर्नुस ४ विधिहरु
२०७८-०६-२८ ०५:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं २८ असोज। नेपालमा अहिले पनि करिब १७ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखा मुनि रहेका छन् ।त्यस्तै, अन्य धेरै मानिसहरु पनि सामान्य आर्थिक स्थितिमा रहेका छन् । शाहकारीहरुले आफ्नै तवरले दशैँतिहार मनाउने गर्दछन् । विशेषत मासु सेवन गर्नेले भने जस्तै अवस्थामा पनि मासुको जोहो गर्ने प्रयास गर्छन् ।यद्यपि सबै नेपालीले मासु स्टोर गर्न फ्रिज राख्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यस्तै, यदि फ्रिज छ भने त सजिलै मासु वा अन्य कुनै पनि कुराहरु केही दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । तर फ्रिज नभए पनि परम्परागत शैलीलाई अपनाएर मासुलाई केही दिनसम्म स्टोर गर्न सकिन्छ ।दशैँतिहार नेपालीहरुले विभिन्न परिकारहरु सेवन गर्ने गर्छन् । जसमध्ये मासु प्रमुख हुने गर्दछ । दशैँको सप्तमी, अष्टमी र नवमीका दिन एकैपटक धेरै मासु घरमा राखिने गरिन्छ ।यदि सही तरिकाले भण्डारण गरिएन भने मासु बिग्रिने वा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ । तसर्थ यस लेखमा घरमा फ्रिज नभए पनि केही दिनसम्म मासुलाई सही तरिकाले कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।
२. डिहाइड्रेसन विधिः यो प्रक्रिया निकै सहज र प्रभावकारी प्रक्रिया हो । जसका लागि विद्युतीय डिहाइड्रेटरको सहयता लिन सकिन्छ । त्यो भन्दा सरल भनेको चाँही घामको प्रकाश हो । यस विधिमा मासुलाई लामो लामो डोरी जस्तो बनाएर काटेर घाममा सुकाएर राखिन्छ । यसो गरेपछि हप्ता दिन भन्दा बढी समय सुरक्षित तवरले स्टोर गर्न सकिन्छ । ३. सल्टिंगः यो विधि पनि निकै पुरानो हो । यसमा सकेसम्म मासुका सबै बोसो निकाल्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसपछि बाहिरी भागमा नुन दलिन्छ त्यसपछि करिब हप्ता दिनलाई केही चिसो स्थानमा राखिन्छ । त्यसपछि पुनः चिजक्लोथमा बेरेर सुख्खा स्थानमा राखिन्छ र अब करिब २ ३ महिनापछि समेत सेवन गर्न सकिन्छ ।
पूर्ण रुपमा सेलाउन दिएर टाइट गरी हावा नपस्ने गरी बिर्को लगाएर राखेपछि कम्तीमा ३ दिन सजिलै स्टोर गर्न सकिन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाँही यदि बिचमा प्रयोग गरियो भने सबै प्रयोग गर्नुपर्छ नत्र चलाएर फेरि स्टोर गर्दा बिग्रने सम्भावना हुन सक्छ ।यसरी तपाईँले फ्रिज बिना पनि केही दिन मासुलाई स्टोर गरेर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ ।